Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid oo min 20,000 tikidh ka helay final-ka Champions League – Gool FM
Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid oo min 20,000 tikidh ka helay final-ka Champions League
Haaruun May 7, 2016
(Madrid) 07 Maajo 2016 – Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa middiiba la siiyey 20,000 (labaatan kun oo tikidh) final-ka Champions League 2016 oo sanadkan ka dhacaya magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga.
Garoonka San Siro ayaa marti gelin doona kama dambeysta koobka horyaallada Yurub 28 bishan May, waxaana uu qaadaa in ka badan 80,000, laakiin 72,000 ayaa hoos loo dhigay sababo la xiriira ammaan ka hor kulanka u dhexeeya labada kooxood ee reer Spain.
Sida ay warinayso jariiradda AS, ku dhawaad 26,000 oo tikidh waxaa isticmaali doonaa, Guddiga maxaliga ah ee abaabul-ka, UEFA, ururada qaranka, warbaahinta iyo maalgeiyeyaasha tartankan final-ka ah.
Kulanka dhici doona dabayaaqada bishan ayaa noqon doona mid ku celis ah ee final-kii 2014 Champions League oo labadan kooxood ee ka dhisan Madrid ay isku qabteen, kaasoo ka dhacay maagalada Lisbon, markaasoo waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray ay Real Madrid ku xaqiijisatay koobkeedii 10-aad ee Yurub.
Daafaca Man United ee Matteo Darmian oo dhaawac looga saaray kulanka soconaya ee Norwich City